Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » SkyWest na -eme ka Delta ụgbọ elu nwee obi ụtọ
Airlines • Airport • Akụkọ kacha ọhụrụ na Brazil • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • News • Ịrụ ọrụ • Technology • Tourism • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akwụkwọ akụkọ USA • Akụkọ dị iche iche
SkyWest na -azụta ụgbọ elu 16 Embraer ọhụrụ maka Delta Air Network
E175 bụ azụ nke ahịa mpaghara mpaghara North America, ka ụlọ ọrụ ahụ na-amalite ịpụta site na ọrịa na-efe efe anyị na-ahụ ka a na-achọ ịrị elu ogologo oge maka ụgbọ elu nwere ikike iji nyefee njikọ ụlọ dị mma.
Embraer ekwenyela ire ere ụgbọ elu ọhụrụ 16 E175 na SkyWest, Inc ma kpughee ihe ndabere.
A ga-ebunye ụgbọelu ahụ nwere oche 76 n'ụgbọ ahịa Delta ma nwee nhazi klaasị atọ.
SkyWest na -arụzi ụgbọ elu 71 E175 maka Delta Air Lines.
E175 abụrụla ụzọ ndụ maka ndị na -ebu ya n'ihi na ha dabara nke ọma n'iwughachi ụzọ, gbakwunyere ugboro ugboro, na gbakwunye ikike ịbawanye iji gboo mkpa anụ ụlọ na -ebigharị.
Embraer ekwenyela ire igwe ụgbọ elu ọhụrụ E16 iri na isii Ụlọ ọrụ SkyWest, Inc. maka ịrụ ọrụ n'ime Delta Air Lines netwọkụ, na -agbakwunye na 71 E175 jets SkyWest arụworị ọrụ maka Delta Air Lines.
Ụgbọ elu E175 ga -efega naanị Delta n'okpuru nkwekọrịta ịzụta ikike (CPA).
Uru nke nkwekọrịta ahụ, nke a ga -etinye na nkwụghachi azụ nke atọ nke Embraer, bụ nde $ 798.4, dabere na ọnụahịa ndepụta.
A ga-ebunye ụgbọelu ahụ nwere oche 76 n'ụgbọ ahịa Delta ma nwee nhazi klaasị atọ. Nnyefe na-amalite n'etiti 2022.
President na CEO nke SkyWest, Chip Childs, kwuru, sị, “SkyWest na -arụ ọrụ karịa E175s karịa ụgbọelu ọ bụla ọzọ n'ụwa. Site n'ụgbọ elu ndị a, anyị ga -enwe ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 240 E175s na -arụ ọrụ na ụgbọ elu na North America. N'ọnwa a, anyị dị mpako iru awa ụgbọ elu nde abụọ na E175. Ndị ahịa anyị hụrụ E175 n'anya, anyị nwekwara ntụkwasị obi dị ukwuu na ekele maka mmekọrịta anyị na Embraer. ”
Mark Neely, VP Sales and Marketing, Amerika, Embraer Azụmaahịa azụmahịa, kwuru, sị, “Mmekọrịta anyị na -enweghị atụ na SkyWest na -aga n'ihu na ndokwa ọhụrụ a maka Delta. E175 bụ azụ nke ahịa mpaghara mpaghara North America, ka ụlọ ọrụ ahụ na-amalite ịpụta site na ọrịa na-efe efe anyị na-ahụ ka a na-achọ ịrị elu ogologo oge maka ụgbọ elu nwere ikike iji nyefee njikọ ụlọ dị mma. E175 abụrụla ụzọ ndụ maka ndị na -ebu ya n'ihi na ha dabara nke ọma iji wughachi ụzọ, gbakwunye ugboro ugboro, ma gbakwunye ikike ịbawanye iji gboo mkpa ụlọ.